China YASKAWA Robot Brick Kuisira vagadziri uye vanotengesa | Bricmaker
YASKAWA Robhoti Brick Kuisira
Muna 2008, BricMaker yakaramba iine kumhanya kwetekinoroji, yakatumira Germany SEW giya mota, servo motors, Japan SMC pneumatic zvinhu, Italy Magodi synchronous bhandi, nyika yepamberi Robhoti reFANUC, YASKAWA, KAWASAKI, KUKA neGerman Siemens PLC yakawanda yemagetsi yakabatanidzwa hurongwa, vakapinda nguva zvemaziso otomatiki njere.
Isu tinogadzira nyanzvi boka rakanangana ne otomatiki Kucheka-Kugovera-Kuisira system R&D. Robhoti semuchina wekupedzisira tenzi, kuvimbisa iyi yehunyanzvi tekinoroji kugadzikana, isu takatumira robhoti kubva kuJapan neGerman, uye yavo mhando ndeYASKAWA neKUKA. Uye sekuvandudzwa kwemusika wekare wepamba, kurongedza kwemarobhoti kwakanyanya kuwedzera kufarirwa. Sezvo zvazvakanakira kuchinjika, kuvimbika, kuve nyore uye kufarirwa nevakawanda uye vazhinji vanogadzira zvidhinha.
Zvinhu Zvekutsanangurwa Tsananguro
Rinoshanda Brick / block stacking uye kutakura
Kushanda Musimboti PLC Chengetedza otomatiki
Mushure meSevhisi Hupenyu Hurefu Service
Pcs / nguva
Nguva / h
Mapcs / h
a) Zvichienderana: diki yekushandira nzvimbo, uye hapana muganho wenzvimbo. Zvimwe zvinoshanduka kune zvekare zvidhina fekitori nadzurudzo yemarobhoti otomatiki kuisira.
b) Inoshanda: 4 kusvika 6 nguva paminiti yezvidhina auto stacking uye kutakura. Uye yega yega nguva yekukwikwidza kugona kubva pamakumi masere kusvika makumi mana neshanu pcs yezvidhinha, yakachengetedza mamwe magetsi emagetsi
c) Muchitevere: kunenge kusisina zvimwe zvinodiwa zvekuchengetedza, bvunzo dzakaderera kwazvo. Yekumhanyisa kumhanya yakatsiga, uye inogona kushanda isina kumiswa kwenguva yakareba, kusiyana nebhuku remanyowani kodhi billet iyo ichazokanganiswa nezvakasiyana zvinhu.
d) Yunifomu: Iko kuisira maitiro erobhoti ekuisira mashizha akachenesa uye akapfeka yunifomu, kukanganisa kwacho hakugone kupfuura 1mm, uye mukana wekuvhara wakadzika zvakanyanya.
Dhirivhari Gungwa Chiteshi Shanghai, China
Nguva yekuendesa Mazuva makumi mana
Mitengo EXW, FOB, DAF, CFR, CIF
Mitemo yekubhadhara T / T, L / C, D / P, Western Union, PayPal
Kurongedza Mitemo Dampproof, Dustproof, Quakeproof
Chitupa Bureau Veritas, CE, ISO9001, OHSAS18001
Chitupa Chekutanga Japani
Pashure: JKY75 / 65EIII IV-4.0 Vacuum Extruder
Zvadaro: KAWASAKI Robhoti Zvidhina
Kaviri Kuunganidza Robhoti Brick Kuisira System
Yekumhanyisa Kaviri Roller Crusher
Imwechete Kuunganidza Robhoti Brick Kuisira System